Ciidamada kenya oo si rasmi ah ugu biiraya Amisom asbuuca soo socda – Radio Daljir
Ciidamada kenya oo si rasmi ah ugu biiraya Amisom asbuuca soo socda
Nairobi,Mar 9 -Ciidamada kenya ee ku sugan Somalia ayaa lagu wadaa in ay asbuuca soo socda ku biiraan hawlgalka nabad ilaalinta midowga Africa ee Somalia ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaan Amisom, sida uu sheegay afhayeenka ciidamada Kenya Cabtan Emmanuel Chirchir .
Ciidamada Amisom ayaa dagaal kula jira kooxaha Mintidka ah ee Al-shabab , waxana ay xilliyadii ugu dameeyey dhul ka qabsanayeen Al-shabab.
Mr Chirchir ayaan sheegin maalinta rasmiga ay ciidamada Kenya ku biirayaan kuwa Amisom ,laakiin waxa uu tilmaamay in arrintaasi ay dhacayso asbuuca soo socda.
“arrintii la sugayey waxa ay dhacaysa asbuuca soo socda , markaasina waxaan si dhab ah ugu jirnaa Amisom ” sidaasi ayuu Emmanuel Chirchir ku sheegay war uu soo geliyey Twitter-ka.
Gabtan Chirchir ayaa sidoo kale sheegay in khamiistii ay iyaga iyo ciidamada dowladda somalia ay degaan ku dhow magaalada Afmadow ku dileen 6 dagaalyahan oo ka tirsan Al-shabab.
Ciidamada kenya oo galay Somalia badhtamihii bishii Octeber ee sanadkii hore ayaa immika ka mid noqonaya ciidamada Amisom oo ka kala socda dalalka Uganda, Burundi iyo Djibouti.
ciidamada Ethioipia ayaa sidoo kale galay Somalia bishii december si ay u baacsadaan Al-shabab oo dhowaan iyagu shaaciyey in ay ku biireen urur weynaha Al-qaacida.
Talaabada ciidamada Kenya ay ugu biirayaan Amisom ayaa ciidamadaasi Amisom ka dhigaysa illaa 17,000 askari oo xoogan, halkii markii hore ay ka ahaayeen 12,000 askari.
Ciidamada kenya ee ka mid noqonaya kuwa midowga Africa ayaa lacagta, hubka dareeska ka helaya hawlgalka Amisom.
Wasiirka difaaca ee Kenya Yusuf Haji ayaa 2 asbuuc ka hor sheegay in ay dhameeyeen dhamaan hawlaha looga baahanayahay dhinaac kenya si ay ugu biiraan hawlgalka Amisom.